VALENTINE DAY မှာ ခဈြသူလေးနဲ့ ကွညျနူးနတေဲ့ အမိုကျစားပုံရိပျတှနေဲ့ မိနျးကလေးတှေ ကို အသညျးခွှလေိုကျတဲ့ မိုးအောငျရငျ…. – Alanzayar
VALENTINE DAY မှာ ခဈြသူလေးနဲ့ ကွညျနူးနတေဲ့ အမိုကျစားပုံရိပျတှနေဲ့ မိနျးကလေးတှေ ကို အသညျးခွှလေိုကျတဲ့ မိုးအောငျရငျ….
ပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ မိုးအောငျရငျကတော့ တဈခြိနျက အနုပညာနယျပယျမှာအောငျမွငျခဲ့တဲ့မငျးသားတဈလကျဖွဈပါတယျ။ သရုပျဆောငျ မိုးအောငျရငျကတော့ သူရဲ့အခဈြရေးနဲ့ ပတျသတျပွီး သိုသိုသိပျသိပျနလေရှေိ့တဲ့ မငျးသားတဈလကျပါ။
ဒီနေ့ Valentine’s day မှာတော့ မိုးအောငျရငျက ခဈြသူ ကောငျမလေးနဲ့ အမိုကျစားပုံတှပေို ပရိသတျကို ခပြွလာတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ မိုးအောငျရငျက ပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ Valentine’s Day လေးဖွဈကွပါစေ၊ ဒီနလေ့ေးမှာ ကိုခဈြရတဲ့သူနဲ့ ပြျောပြျောပါးပါး ဖွတျသနျးနိုငျပါစဆေိုပွီး ပွောပွလာတာ ဖွဈပါတယျ။ crd
VALENTINE DAY မှာ ချစ်သူလေးနဲ့ ကြည်နူးနေတဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်တွေနဲ့ မိန်းကလေးတွေ ကို အသည်းခြွေလိုက်တဲ့ မိုးအောင်ရင်….
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင်ကတော့ တစ်ချိန်က အနုပညာနယ်ပယ်မှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင်ကတော့ သူရဲ့အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိုသိုသိပ်သိပ်နေလေ့ရှိတဲ့ မင်းသားတစ်လက်ပါ။
ဒီနေ့ Valentine’s day မှာတော့ မိုးအောင်ရင်က ချစ်သူ ကောင်မလေးနဲ့ အမိုက်စားပုံတွေပို ပရိသတ်ကို ချပြလာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးအောင်ရင်က ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ Valentine’s Day လေးဖြစ်ကြပါစေ၊ ဒီနေ့လေးမှာ ကိုချစ်ရတဲ့သူနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဆိုပြီး ပြောပြလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ crd
Previous Article ကလေးဝဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ကြက်သီးထလောက်အောင်မှန်နေတဲ့ အနာဂါတ်မြန်မာပြည်ဟောစာတမ်းများ…q
Next Article ခွခြေောငျးလေးတှကေပွောတဲ့ သငျရဲ့စိတျနသေဘောထားလေးတှကေ ဘာတှလေဲ